freeBSD နဲ့ server ထောင်ချင်လို့ help me! - MYSTERY ZILLION
freeBSD နဲ့ server ထောင်ချင်လို့ help me!
SUSE LINUX SERVER နဲ့ free BSD ဘာနဲ့ server ထောင်ရင်ပိုကောင်းမလဲ.....
step by step ပေါ့......
အကြံပြုပေး.....သင်ပေးကြပါအုံး.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...step by step ပေါ့......:103:
server နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ သင်ပေးဖို့ဆိုတာ internet ကိုသာ အားကိုးလိုက်ပါ...
ရန်ကုန်မှာ server သင်တန်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်...
မန်းက netview မှာတော့ suse နဲ့ proxy server သုံးပါတယ်..
မည့်သည့်လိုအပ်ချက်ကြောင့် server ထောင်ရပါသလဲခင်ဗျာ...
ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.. ကို exiter ကစောင့်နေပါတယ်..
ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တာနဲ့ ထောင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲ... သူများတွေကတော့ Linux ကကောင်းတယ်ပြောကြတယ်။ Linux မှာကလည်း ရွေးစရာအများကြီး။ တကယ်တန်း အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ်ပိုင်နိုင်တဲ့ server ထောင်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ မပိုင် မနိုင်ပဲ ထောင်ရင် ကိုယ်ပဲ ဒုက္ခရောက်မှာ။ လေ့လာတာဆိုရင်တော့ ကြိုက်တာနဲ့ ထောင်ပါ။ အလုပ်သဘောဆိုရင်တော့ ကိုယ်အာမခံပေးနိုင်တာနဲ့ထောင်ပေါ့။